Kuisa mari paPsychology, Kusanzwisisa Kusarura uye Misungo Yepfungwa | Ehupfumi Zvemari
Kuisa mari wepfungwa
Claudi Casals | | Bolsa, Entrepreneurs
Hukama hwevanhu nepasi hwakasiyana mune zvese zviitiko. Muzhinji, zvisinei, kune mamwe mapatani, hukama, kusarudzika, uye maitiro akafanana. Hukama ihwohwo pakati pehunhu hwevanhu nekudyara hwave pedyo chaizvo. Mari inogona kunge isingave nemanzwiro pamusoro pevanhu, asi vanhu vane manzwiro pamusoro pemari. Hukama husina musoro zvachose, asi uhwo hunoitika zvine musoro. Nekudaro kukosha kwekunzwisisa psychology kana uchiisa mari.
Isu tinoita tisingazive kazhinji yenguva, inenge 95% yacho. Kuzvinyima uye kuona zviitiko nemaonero akakosha kwakakosha pakuita sarudzo. Uye kana zvasvika kuguta guru raungave naro mune yako portfolio, chekupedzisira chinhu kuita kuita zvisiri-zvine musoro sarudzo. Nekudaro, isu tiri vanhu, uye hatigone kuve zvine musoro 100% yenguva. Nechikonzero ichocho, ini ndiri kuzotaura nezve zvimwe mapatani anokura nenzira yakajairika. Chii chinozokutungamira kuti uone kana zvinhu zviri kukanganisa sarudzo dzako, izvo zvisingafanirwe kunge zviripo.
1 Iyo yekusimbisa kusarudzika mukudyara
1.1 Nzira yekudzivirira sei pakusimbisa kusarudzika?
1.2 Tsvaga mapatani (pareidolia mune zvemari)
2 Dhonza maitiro, kudyara psychology
2.1 Dhonza maitiro emuenzaniso wechiito
3 Zvikwereti Vs Zvinotarisirwa
3.1 Mienzaniso yekunyepedzera kushandisa mari zvisirizvo
Iyo yekusimbisa kusarudzika mukudyara
Chivimbiso kusarura ndiyo hunhu hwevanhu kupa pekutanga kune iro ruzivo runofarira kana runotsigira dzidziso dzavo uye kufungidzira nezve chimwe chinhu. Mienzaniso:
Munhu anotenda kuti Nyika yakati sandara. Tsvaga ruzivo runotsigira nzira yavo yekufunga. Tsvaga ruzivo, uye funga "AHA! Ndaizviziva! Pasi rakatsetseka! ».
Munhu anotenda kuti pane kurangana pamusoro pechinhu. Anotsvaga ruzivo rwunosimbisa dzidziso dzake uye anozviwana. Funga futi ... Ndakangwara zvakadii! Akanga achitaura chokwadi..
Kune mhando mbiri dzekufunga, deduction uye inductive. Iyo yekubvisa inotarisa pazvivakwa kuti isvike kumagumo, uye iyo inductive pakutsvaga nzvimbo dzinovimbisa mhedziso. Iko kusimbisa kusarudzika ipapo, Kukanganisa kwehurongwa nezve kufunga kwakashata. Muitiro wakajairika uyo pakupedzisira, kusvika padiki kana padiki degree, tese tinoratidza.
Es zvine njodzi uye zvinoparadza, uye ndokusaka ndakaiisa pakutanga. Inobata zvakananga kupfuura zvaunogona kufunga muhupenyu hwedu, uyezve nemari. Ichokwadi chakavimbiswa kuti vatyairi vazhinji vanowanzo tenda kuti kudyara kwavakasarudza kungave kwakanaka, asi vanzwe vasina kuchengeteka (kutya). Kubva ipapo, kutsvaga ruzivo rwekutsigira dzidziso dzako kukanganisa. Mumwe mushambadzi anozvifadza neakadai maitiro ngaamire kwete kuisa mari. Kunze kwekunge, mhedziso yako yakasimba zvakakwana kuti isavimbe pamaonero kana kuongororwa kwevamwe.
Kukundikana kuita zvinoenderana kunogona ita nekukurumidza uye kuzvivimba sarudzo uye kubhadhara chimwe chinhu chisina kukodzera. Iwe unozoona hunhu uhu mumabhodhi ehupfumi.
Nzira yekudzivirira sei pakusimbisa kusarudzika?
Muchiitiko chekuti muzvinashawo atange kusimudzira chishuwo ichi, kune hunyanzvi hwekuchimisa. Imwe yacho ndeye fungidzira chinzvimbo chemumwe munhu asingazoise mari mukambani yakasarudzwa. Kubva ipapo, ipa nharo dzinoramba kuti imari yakanaka. Iva nerudzi rwe "hurukuro."
Imwe nzira ndeye fungidzira kuti zvese kana chikamu chikuru chemari chakarasika, uye zvibvunze kuti nei izvozvo zvingaitika.
Vatengesi vanoisa zvisarudzo zvavo vasingavabvumire kuwira mukusarudzika kusarudzika vanowana mibairo yepamusoro
Tsvaga mapatani (pareidolia mune zvemari)
Chechipiri, uye zvakare inoparadza zvakanyanya. Imwe yenzira idzo uropi hwako hungakunyengere nayo ndeyekugadzirisa kwayo. Isu takarongedzwa kutsvaga zvakafanana, zvakafanana uye mapatani Kwese kupi. Izvo zvakafanana nesoftware inouya yakaiswa mauri, hausi kuzoibvisa. Kusina zano reichi chiitiko zvinokutungamira kuti utende zvinokwanisika "zvisirizvo" zvakagadzirwa neuropi hwako, asi iwo ari manyepo chaiwo.
Iri harisi dambudziko rehungwaru. Muchokwadi, ihwo hwaro hwekuti tinoziva sei nyika, tinonzwisisa mazwi, tinonzwisisa nharaunda, uye isu tinofungidzira kuti chimwe chinhu chingaitika.
Kutenda mashura. Kungoti chimwe chinhu chakaitika kakawanda hazvireve kuti chichaitika zvakare. Chero bedzi zvikonzero zvacho zvikasimba.
Kana iwe uri munhu anonzwisisika, wemasvomhu uye saka munhu anoongorora, ndine chokwadi chekuti iwe uchaona nokusaziva mapatani mune akawanda makotesheni. Hunyanzvi uhwu hunoshamisa, hunoitwawo nguva dzose uye nekumanikidza. Asi sezvo paine makore anotaridzika kunge anodhura uye asiri, iwe unofanirwa kudzidza kuti zvinhu zvinoitika pasina kubatana kune mumwe nemumwe.
Dhonza maitiro, kudyara psychology
Inozivikanwa seBandwagon mhedzisiro, kusvetuka pane iyo bandwagon. Izvo zvinogadzirwa nemukana wekuona kuti vamwe vanhu vanotenda sei mune chimwe chinhu uye voda kutevedzera. Kazhinji nekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka (kana saizvozvo zvinoita). Uye izvo zvinowanzo kukonzera ndezvekuti kudiwa kwechigadzirwa kana chiito kunowedzera, semuenzaniso. Sezvo kudiwa kuri kuwedzera, mutengo unowedzera kukwira, uye kana vanhu vazhinji vakaita purofiti, vamwe vanotanga kufarira kuti vasarasikirwe nemukana, kuwedzera kudiwa zvakanyanya uye nekudaro mutengo.
Ndiyo huru yemhedzisiro inoyananisa bubbles mune zvemari. Iyo inowanzo bata vanhu vazhinji, kunyangwe vamwe vane hunyanzvi uye psychology pavanenge vachiita mari. Uye iyo yakanakisa nzira yekuzvidzivirira ndeyokutarisa wese munhu achiita zvakafanana, mira kuti ufunge, uye zvibvunze pachako kuti "Chii chandatadza?" Kudzivisa kupinda mune ino mizariro yesangano remufaro kazhinji kunokudzivirira kubva kukurasikirwa kukuru kunogona kuitika.
Dhonza maitiro emuenzaniso wechiito
Parizvino tinogona kuwana migove yemakambani akanyorwa pamusika wemasheya, ane nhamba dzinotipa kuwanda kwakanyanya kuwanda kwemhindu yavo. Ehe, kune yakakura chikamu ivo iaya ekudyara mafirosofi makambani "kukura". Nekudaro, havazi vese vanozogara vachizadzisa zvaunotarisira, uye dzimwe nguva kune zviyero zvinogona kuve zvakakwirira kwazvo. Zvakawanda zvekuti papepa zvishoma zvinoyevedza zviitiko dzimwe nguva zvinoitika. Ngatimbofungidzirai muenzaniso unogona kuve chaiwo kesi.
Fungidzira kuti unosangana nemuvakidzani wako. Uye anotsanangura kuti ane kambani ine mambure akakosha kuita $ 50.700, uye kuti ane chikwereti che $ 105.300 uye kuti ari kufunga kuitengesa. Ndizvozvo kana iwe ukakwanisa kutengesa mari yako wega zvakanyanya kana zvishoma unogona kubhadhara hafu yezvawe chikwereti. Unobvunza ... "Hei, wakawana marii gore rapfuura?" Uye anopindura kuti akahwina $ 12.000. Sezvo iwe uri munhu akangwara kwazvo, iwe unotora kutarisa pamhedzisiro yemakore apfuura. Uye iwe unoona kuti chikwereti chako chinowedzera nekukurumidza kupfuura chaunowana.
Zvichipa mamiriro azvino, iwe unomubvunza kuti anozvitengesa zvakadii, uye anozvipindura izvo $ 1.640.000 kambani inopa $ 12.000 pagore nechikwereti chisingaregi kukura. Ungapindura kutii? "Ah hongu, $ 1.640.000 inoita kunge mutengo wakanaka!" kana zvirizvo waizoramba uchifunga ... "Izvi hazvigoneke".
Dzimwe nguva isu tinogona kuwira mukuyedza uye toona midziyo isingamire kukwira mumutengo kuti ubatsirwe nekubudirira ikoko. Dambudziko raizove rekukanganwa kuti pakupedzisira zvikamu zvinomiririra zvikamu zvemakambani chaiwo uye kuti kuongororwa uku kunogona kusanzwisisika. Kwete nguva dzose zvese zvine mutengo wakaringana, nekuti iyo modhi kana tarisiro yekukura inogona kubatsira kuita kuti kukoshesa kuve kwakanyanya kana kushoma kumusoro. Kuchengeta inotonhorera psychology kana kuisa mari kunotibatsira kuti tigare kure nemabhuru.
Zvikwereti Vs Zvinotarisirwa
Iwe unoziva nezve mumwe munhu anounganidza akawanda uye akawanda zvikwereti? Izvo zvinoenda mune icho chiuno kubva icho chisinga bude. Iwe unoziva here kana iwe uine mari uye uchida kuiisa mari, chii chaunotarisira kuwana? Zvakanaka, iyi kesi iri nyore kunzwisisa, asi nechimwe chikonzero, Ndakaona hunhu uhu nenzira yakasarudzika.
Kune vanhu avo kana nekuve nezvikwereti kukambani, mogeji, kana chero chikwereti nemakadhi, nezvimwe, vanobhadhara mubereko weodha ye6-7% kana kunyangwe zvimwe. Chaizvoizvo mapfumbamwe muzana. Dambudziko nderekuti kana iwe ukachengeta chimwe chinhu, ndeipi basa inoitirwa kupa iyo mari. Chinovhiringidza ndipo apo munhu paanofunga kuti chakabudirira kwazvo kuisa mari mumusika wemasheya kana kutenga zvigadzirwa zvinopa kufarira kwe2% (semuenzaniso). Kana iwe uine psychology yakanaka kana uchiisa mari, uye isu tisingawire mukunyepedzera kwemari, tichaona kuti sarudzo iyi haina kunaka.
Mienzaniso yekunyepedzera kushandisa mari zvisirizvo
Ngatitarisei zvinhu nemaonero:
Chikwereti che7% kana kupfuura chinowanikwa. Uye iwe une mvura ("zvakasara") iyo yauri kutarisira kuwana 2%. Ngatitii zvimwe, kuti kuchengetedza kwako kwakaenzana nechikwereti chako ...
Kana ndikati "ndakaita kondirakiti ye € 20.000 pa7%, uye neaya € 20.000 ndichaenda kutenga chigadzirwa chinondivimbisa 2% pagore" ... Chero ani zvake mundangariro dzake chaidzo angafunga kuti ndiri kunyepa kana kuti handizive zvandiri kutaura.
Zvakanaka, ndinoti izvi zvakanangana nevanhu avo, nekuti vane chikwereti chakakura, vanotenda kuti chakangwara chinhu kusabvisa uye kutenga zvimwe zvigadzirwa. Zvinogona kunge kuti munhu, seuzivi hwehupenyu, haafarire kudzikisa chikwereti chavo uye kurarama zuva nezuva. Yakakwana inoremekedzwa. Asi kuchengetedza, kuchengetedza chikwereti, uye kuwana mibairo yakaderera pane iyo mubereko uri kubhadharwa ... Kwete. Iyo haina kana hwaro hwakajeka.
Ndinovimba kuti izvi zvidzidzo zvakushandira iwe, uye kuti sarudzo dzako dzemari nehupenyu dzichava dzakarurama kubva ikozvino. Kuziva misungo yedu yepfungwa uye mashandiro epfungwa dzako paunenge uchiisa mari, inozopedzisira ikubatsira iwe kuita sarudzo dzakanaka, uye kwete kuita zvikanganiso zvakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Kuisa mari wepfungwa
Kusarudza rakabudirira mari yekudyara mu2021
Vanopinda nguvai pakuramwa?